Wafdi uu horkacayo Madaxweyne Xasan oo booqday Xudur – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xudur – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamudd iyo wafdi uu hogaaminayey ayaa manta gaaray magaalada Xudur ee xarunta Gobolka Bakool, isagoo ka tegay goblka Shabeellaha Dhexe oo uu uu saaka ku hormay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Xudur oo Alshabaab go’doomisay u tegay inuu u kuurgalo xaaladda nololeed ee magaalada.
Madaxweynuha ayaa dadweyne fara badan kula hadlay garoonka magaalada, waxaana uu sheegay in socdaalkiisa uu u tegay magaalada Xudur ay tahay sidii uu uga warqabi lahaa xaalada ay ku noolyihiin bulshada halkaasi ku dhaqan.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa intaasi kaddib waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM, gaar ahaan ciidamada Ethiopia.
Degmada Xudur ayaa ka mid ahayd degmooyinkii ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ka socda dalka Itoobiya kala wareegeen Al-shabaab.
Socdaalkan ayaa waxaa madaxweynaha ku wehlinaya xildhibaanno iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, iyadoo ay noqonayso markii ugu horreysay oo uu safar ku tago degmadaas tan iyo markii Al-shabaab laga qabsaday.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdi uu hogaaminayo oo saakay gaaray deegaanka Buurane ee ka tirsan Gobolka Shabeelaha Dhexe, wuxuuna dhagax dhigay xarun cusub oo ay Jaamacadda Benaadir ay ka fureyso deegaankaasi.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdiga la socda ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanka Buurane oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe, halkaasi oo ay kusugnaayeen dadweyne, mas’uuliyin ka tirsan dowladda, siyaasiyiin iyo xubno kale oo maamulka gobolkaasi ka mid ah.